I-Triptorelin Acetate Injection / Powder: Ngingayitholaphi? - UPhcoker
I-1. I-Triptorelin Acetate
I-2. I-Triptorelin Acetate isetshenziselwa ini?
I-3. Ngabe i-Triptorelin Acetate isebenza kanjani kuwe?
I-4. Kufanele ngiyisebenzise kanjani iTarttorelin Acetate?
I-5. Yini okufanele uyazi ngaphambi kokuyisebenzisa?
I-6. I-Triptorelin Acetate Dosage
I-7. Imiphumela emibi usebenzisa i-Triptorelin Acetate
I-8. Ingabe i-Triptorelin Acetate ilungile kimi?
I-9. Ngingayitholaphi iTarttorelin Acetate?
I-Triptorelin Acetate nayo yaziwa njenge-Triptorelin Acetate140194-24-7 iyi-molecule yamakhemikhali e-organic enokuningi okufakwa esikhundleni se-athomu ephakathi nendawo, ngamagama alula, lokhu kusho ukuthi kunama-athomu amaningi ensimbi, amaqembu asebenzayo anamathele kwikhabhoni i-athomu kusakhiwo samakhemikhali. Ngokuyisisekelo ngegama elithi 'i-Organic', okusho ukuthi le molekyuli ine-athomu lekhabhoni njenge-athomu eliphakathi. Yonke indawo eyenziwe ngezinto eziphilayo inebukhona be-athomu lekhabhoni yingakho ikhabhoni iyisihluthulelo sempilo.
I-Triptorelin Acetate isetshenziswa kabanzi njengesidakamizwa futhi nokwakheka kwamakhemikhali elabhorethri. Ukusetshenziswa kwomuthi kubaluleke kakhulu ngoba kukhethekile kakhulu. I-Triptorelin Acetate imnene acidic futhi inesilinganiso esincanyana kakhulu sokuhlinzeka nge-hydrogen njengoba kuqhathaniswa nezinga lokwamukelwa kwe-hydrogen. Ine-formula yamakhemikhali ye-C66H86N18O15 nesilinganiso se-atomic molar ye-1311.49 gram nge-mole ngalinye. Abadayisi noma abathengisi bezidakamizwa bangasebenzisa futhi amagama athi i-decapeptyl, i-gonapeptyl njll, okuvame ukuthi kuthiwe yi-Triptorelin Acetate. The ukusetshenziswa kwe-Triptorelin Acetate ezweni lanamuhla selivelile, Umuthi usetshenziselwa ukwelapha umdlavuza we-Prostate (Ukwabhekisisa nezindlala ze-endocrine ohlelweni lokuzala lomuntu wesilisa). Hhayi umdlavuza kuphela kepha osetshenziswe ezigabeni ezithuthukile zokulawulwa kwama-hormone, i-testosterone control njll. Uyaziwa ukusetshenziswa kwe-Triptorelin Acetate noma i-Triptorelin Injection, Kungasiza kakhulu ezweni lanamuhla. Umakhi we-Triptorelin Acetate ubuye aphakamise ukuthi kufanele uthathe udokotela wakho ukuthi abheke imibono ngaphambi kokuthatha umuthi.
2. I-Triptorelin Acetate isetshenziselwa ini?
I-Triptorelin Acetate140194-24-7 yaziwa kakhulu njengokujova kweTarttorelin yeTrelstar. Ukujova kweTarttorelin kusiza kakhulu ekwelapheni umdlavuza we-Prostate advanced. Ijozi le-Triptorelin libuye lisetshenziselwe ukulawula ama-hormone ezinganeni; Icala lokusebenzisa ukuthi lapho ingane ikhuthele kakhulu ekukhuleni kwayo kanye nama-hormone ayo ekhishwa ngokushesha ngaphambi kokuba iholele esigabeni sokuthomba, umjovo weTarttorelin usetshenziselwa ukunciphisa ukukhululeka kwe-hormone. Lo muthi ungaphansi kokuhlukaniswa kwe IGonadotropin ikhulula i-hormone isifinyezo njenge-GnRH. Kuyasiza kakhulu ukulawula izingane ngokukhula okujwayelekile kunokukhula okujwayelekile kobulili. Ngamagama alula, umjovo weTarttorelin usetshenziselwa ukunciphisa ukwehla ngokweqile kokubuyiselwa kokuhlolwa. I-testosterone yi-hormone ebhekele abalingiswa besilisa besilisa. Kukhona okunye ukusetshenziswa okuningi futhi udokotela wakho angakuphakamisa ngokususelwa ekugomeni kwakho komzimba. Umuntu kufanele anakekele umthamo njengoba umuthi ungeke usebenze ngokufana kuwo wonke umuntu, imiphumela emibi kufanele ibhekwe ikakhulukazi lapho usuqala ukusebenzisa umuthi.
I-Triptorelin Acetate nayo isetshenziselwa ukwelapha umdlavuza webele kubantu besifazane. Into eyodwa okumele iphawulwe ukuthi umjovo weTarttorelin Acetate ngeke uwasuse wonke amaseli womdlavuza uwedwa, Iyanciphisa ukukhula kwe-hormone ukuze amaseli womdlavuza ayeke ukusakazeka ngaphakathi komzimba womuntu, Lokhu kuyindlela yokwelapha engaba nemiphumela emincane kakhulu kwesinye isikhathi. Ungakhohlwa ukuthatha ukuhlolwa okujwayelekile komzimba wakho ethemini usebenzisa umuthi nanoma yiluphi uhlobo lokungajwayelekile kufanele lubikwe kudokotela wakho ngaphambi kokuthi luqale futhi luqale ukubonisa imiphumela emibi kakhulu.
Umjovo uqala isenzo sawo ngokuqala ngemithambo futhi wenza ama-hormone akhulisayo njenge-testosterone njll. Isenzo saso se-micobiological kuma-hormone nezitho ezikhipha ama-hormone kungenzeka singabi yingozi kakhulu kepha kusame ngomthamo womuthi nomuthi wokugomela womuntu. Ngokuvamile, umthamo owodwa awukhombisi umphumela kodwa umthamo othile obekwe ngudokotela wakho uzosiza kumthethonqubo wokukhula.
3. Kanjani I-Triptorelin Acetate work kuwe?
The Umjovo weTarttorelin (Trelstar), umuthi usebenza kwizindlala ze-endocrine futhi ususa amangqamuzana omdlavuza. Uma kukhulunywa ngomdlavuza we-Prostate osezingeni eliphakeme, kusho ukuthi umdlavuza usabalale kwezinye izitho ezivela ezithweni ze-Prostate. Amangqamuzana omdlavuza we-Prostate ahamba ngohlelo lwakho lwe-lymphatic luye kwi-rectum yakho, amathambo kanye nesinye futhi kwezinye izimo. I-Triptorelin Acetate lapha isiza ekususeni unaphakade wonke amangqamuzana omdlavuza, i-Triptorelin Acetate iyasiza kumdlavuza kepha ngasiphi izinga incike ekuthambekeni nasekuguleni kwakho.
Uma udokotela wakho eqala ukubona ukuncishiswa kwamahomoni akho, lokho kufanele kube umsebenzi we-Triptorelin Acetate.
Uma udokotela wakho eqala ukubona ukwanda kwamaseli womdlavuza wakho eyeka, khona-ke lokho kufanele kube ngumsebenzi weTarttorelin Acetate
Uma uqala ukubheka ushintsho ekubukekeni komzimba wakho, khona-ke lokho kufanele kube ngumsebenzi weTarttorelin Acetate
Ngamagama alula i-Triptorelin Acetate umuthi owodwa onjalo njenganoma yimuphi omunye umuthi otholakala emakethe, usebenza ngokubhekana nezindawo ezithintekile emzimbeni wakho futhi uyaphokophela ekwelashweni. Kumele uqaphele kakhulu umthamo futhi futhi phakathi kwemithi elandelanayo.
Kukhona nokubuyekezwa okuningi kweTarttorelin Acetate ku-inthanethi okungachaza ngokujulile. Umakhi weTarttorelin Acetate uprinta ukusebenza okufushane ekhasini losizo lomkhiqizo.
4. Kufanele ngiyisebenzise kanjani iTarttorelin Acetate?
I-Triptorelin Acetate (140194-24-7) isetshenziswa ekwelashweni komdlavuza (umdlavuza we-Prostate) kanye nokulawulwa kokukhula kwamahomoni. Umuthi we-Triptorelin Acetate unikezwa udokotela wakho njengendlela yomjovo, imvamisa, umjovo uzoba kanye kuwo wonke amasonto e-4-(lokhu kungahluka ngezimo zakho zempilo nokungavikeleki). Kufanele uqaphele ku-dosage ukuze ugweme noma yimiphi imiphumela emibi engadingekile. Kusetshenziselwe wena, ngikweluleka ukumaka usuku lwakho ekhalendeni futhi ngezikhathi ezithile uthathe umjovo weTarttorelin Acetate ngenani elifanele lomthamo wemiphumela emihle. Ukuqothuka kwe-Urinary kuwuphawu oluyiphutha ngenkathi usebenzisa lesi sidakamizwa. Kulokhu, kufanele uthintane nodokotela wakho futhi kufanele nisebenzele lokhu ekubonisaneni. Nokho, lokhu kuzoba kuphela kumaviki ambalwa okuqala. Ukuvuleka kwesifo esivamile, ukulimala kwethambo kungaba ezinye izinkomba kulokhu kusebenzisa lesi sidakamizwa kodwa kufanele utshele udokotela wakho uma beqhubeka nokwanda ebuhlungwini. yize ingekho imiphumela emibi emibi, Akukho lutho olungahambi kahle ngasohlangothini oluphephile ngenkathi uzama umuthi omusha. Ungesabi futhi, umuthi usebenza kahle kuwe futhi usekelwa udokotela wakho njalo. Nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi somuthi, zizwe ukhululekile ukuxhumana nodokotela wakho maqondana nanoma yiziphi izingqinamba zomuthi. Ukusetshenziswa kuzochazwa uchwepheshe wakho futhi ngikweluleka ngomusa ukuthi ungaphazamisi noma yimuphi umthamo noma isikhathi somuthi.
5. Yini okufanele uyazi ngaphambi kokuyisebenzisa?
Ngokuvamile i-Triptorelin Acetate isetshenziswa ngabantu abahlushwa umdlavuza we-Prostate noma izindaba zokukhula kokuqala. Kufanele bazi ukuthi lesi sifo singalapheka uma sisheshe sifika emithini. Kufanele ngezikhathi ezithile babonane nodokotela noma uchwepheshe wabo uqobo maqondana nokuthinta uhlangothi noma izimpawu, Ngezinye izikhathi imiphumela emibi enganakwa kakhulu ingakhula ibe inkinga enkulu. Lezi zinto kufanele zinakekelwe ngaphambi kokusebenzisa noma yisiphi lesi sidakamizwa njengomuthi. Isiguli kufanele futhi sikhumbule ukuthi umjovo weTarttorelin Acetate ngeke uwususe ngokuphelele umdlavuza ngasikhathi sinye, Imane imise ama-hormone lawo wona amise ukukhula kwamaseli womdlavuza. Lo muthi awuqedi umdlavuza emzimbeni wakho; Iphulukisa ngendlela ehamba kancane futhi eqinile ngokungayivumeli ukuthi ikhule. Kufanele futhi useshe Ukubuyekezwa kwe-Triptorelin Acetate. Noma ngabe kunesibekiwe, akukho lutho olungalungile ekufuneni lokho kubuyekezwa kweTarttorelin Acetate ku-inthanethi.
6. I-Triptorelin Acetate Dosage
Umthamo weTarttorelin Acetate uhlukile ekuqineni kwinkinga nempilo yesiguli. Umthamo weTarttorelin Acetate ubuya ekugomeni kwesiguli.
Umthamo Wenyanga ye-1
Umjovo weTarttorelin noma I-Trelstar isidakamizwa esisebenza kakhulu uma umthamo wemithi unqunywe ngokufanele.
Ngomuthi okhipha ukuhamba kancane kwenyanga, i-Trelstar iyanconywa ukuthi idedelwe e-3.75mg nge-2ml amanzi angenamakhaza njengasemjovo. Lokhu kuzoqhubeka inyanga. Lokhu kumele kube umjovo we-intramuscular. Amanzi we-3.75mg Triptorelin Acetate + 2ml azosebenza njengesisekelo se-peptide. Lomthamo uphuma ngegazi emithanjeni yezicubu zomzimba futhi wehlise inani lamahholo ngomphumela.
Lomthamo kumele wenziwe kusetshenziswa inalithi ye-21 gauge noma uhlelo lokulethwa komthamo owodwa.
Umthamo Wenyanga ye-3
Ngemithi ekhipha izinyanga ezintathu, i-Trelstar iyanconywa ukuthi idedelwe e-11.25mg nge-2ml eyakhiwe ngamanzi angenalutho njengasemjovo. Lokhu kuzoqhubeka njalo ezinyangeni ezintathu. Lokhu kumele kube umjovo we-intramuscular. Amanzi we-11.25mg Triptorelin Acetate + 2ml azosebenza njengesisekelo se-peptide. Lomthamo uphuma ngegazi emithanjeni yezicubu zomzimba futhi wehlise inani lamahholo ngomphumela. Lomthamo kumele wenziwe kusetshenziswa inalithi ye-21 gauge noma uhlelo lokulethwa komthamo owodwa.
Umthamo Wenyanga ye-6
Ngemithi ekhipha izinyanga eziyisithupha, i-Trelstar iyanconywa ukuthi idedelwe e-22.5mg nge-2ml amanzi angenasici njengasemjovo. Lokhu kuzoqhubeka njalo ezinyangeni eziyisithupha. Lokhu kumele kube umjovo we-intramuscular. Amanzi we-22.5mg Triptorelin Acetate + 2ml azosebenza njengesisekelo se-peptide. Lomthamo uphuma ngegazi emithanjeni yezicubu zomzimba futhi wehlise inani lamahholo ngomphumela. Lomthamo kumele wenziwe kusetshenziswa inalithi ye-21 gauge noma uhlelo lokulethwa komthamo owodwa. Umthamo weTarttorelin Acetate ungahluka njengalokhu futhi kungcono ukuthatha izeluleko zakho kodokotela.
Ungasebenzisa i-Triptorelin Acetate kunoma yisiphi isikhathi semithamo ekhululekile. Kepha kufanele uwusebenzise ngemuva kokubonisana nodokotela abagunyaziwe futhi ngemuva kokuthi ekuyalele lo muthi.
7. Imiphumela emibi usebenzisa i-Triptorelin Acetate
Uma uqala ukusebenzisa umuthi i-Triptorelin Acetate, ikakhulukazi uma uqala ukusebenzisa lo muthi lokhu kungenyusa okwesikhashana ama-hormone athile, lezi yizimo ezifanayo nezimo ezisetshenziswayo. Kodwa-ke, lokhu akufanele kube yinkinga kepha kuneminye imiphumela emibi kakhulu okufanele ibhekane nayo ngokushesha. Ukuqhuma kwe-urinal, ukuchama kobuhlungu negazi lapho uchama kungenye yemiphumela emibi kakhulu njengoba iTrelstar iphatha isifunda se-Prostate. Lokhu kuyenzeka futhi ngenxa ye-overdosage futhi kuzoba okwesikhashana njengoba umzimba wakho usakha amasosha omzimba kulomuthi osanda kwethulwa. Umakhi weTarttorelin Acetate akuhlangene ngalutho nemiphumela yakho emibi.
Kodwa-ke, lo muthi akufanele unikezwe abesifazane abakhulelwe njengoba ungaba nemiphumela emibi enganeni.
I-Triptorelin Acetate iphumela ekunciphiseni okukhulu kwama-hormone, Futhi futhi ne-Triptorelin Acetate kuphumela ekunciphiseni ekusakazweni kwakho komdlavuza. Ungahle ubhekane nanoma iyiphi yale miphumela emibi ye-Triptorelin Acetate.
Kungcono ukuxhumana nodokotela wakho ngokushesha uma uthola enye yale miphumela emibi ye-Triptorelin Acetate:
Ukuthuthumela okuqhubekayo okuphumela kubanda, umphimbo owomile obangelwa ukukhwehlela
Isisu sikhungathekile ngemizwa yokuhlanza ejwayelekile
Izinkinga zesifo sohudo nokugaya.
Ubuhlungu noma yiluphi uhlobo lokuvuvukala ngokomzimba endaweni elimele
Ukwanda kwesilinganiso senhliziyo nge-BP ephezulu kanye namazinga kashukela
Ayikwazi ukusebenza, ukuqina kwemisipha nokuqina
Ubuhlungu emuva nokubuthaka emisipha
Ukwehla kwamandla omzimba
Ulimi alukwazi ukuzwa ukunambitheka
Iphunga le-Fruity emphefumulweni
Ukuvutha okushisayo nokwanda kokushisa komzimba
Ubuhlungu bekhanda nesiyezi
Le miphumela emibi ye-Triptorelin Acetate iningi lemiphumela emibi kepha akulona uhlu oluphelele. Ezinye zingavela futhi ngokuya ngesinye isimo. Uyelulekwa ukuthi uhlale uphapheme futhi ubike udokotela wakho nganoma yiluphi usizo olwengeziwe.
Ngenkathi uthatha lo muthi, Umuthi uya ngokuphuma ngoketshezi lomzimba njengegazi, umchamo njll. Kufanele kwaziwe ukuthi isiguli esithola lo muthi akufanele sithinte noma imuphi walawa manzi okungenani amahora we-48. Amagilavu ​​e-Rubber (abanakekeli) ayadingeka ngenkathi usebenzisa umuthi.
Kufanele utshele udokotela wakho ngayo yonke imishanguzo yamanje onayo ngoba i-Triptorelin Acetate ingasabela neminye imishanguzo engeke ilunge ngokwanele ukwelashwa.
8. Ingabe i-Triptorelin Acetate ilungile kimi?
I-Triptorelin Acetate ilungele wena uma nje uhlupheka ngezinkinga zehomoni. I-Triptorelin Acetate ingasetshenziswa yinoma ngubani onenkinga ngaphandle kwabesifazane abakhulelwe. Ngaphezu kwalokho, kuzodingeka uthathe odokotela bakho ukuthi babheke lo muthi njengoba kungenzeka wazi ngomzimba wakho kahle. Noma yiluphi udaba oluhlobene nodokotela kufanele luxoxiswane nodokotela wakho kuqala futhi ungaziqhathanisi nolunye udlula emithini efanayo, nobabili kungenzeka ukuthi ninemikhuba ehlukene yokuzivikela komzimba nokudla, wonke umuntu akafani. I-Triptorelin Acetate ihola ekwelashweni, futhi uma kunguwe oyifunayo ke kulungile kuwe. I-Triptorelin Acetate powder noma i-Trelstar, Ngisho lokhu kungadida. I-Triptorelin Acetate powder ishibhile ngandlela thile kunomjovo. Kepha umjovo ukhombise imiphumela engcono njengoba uqhathanisa neTarttorelin Acetate powder.
9. Ngingayitholaphi iTarttorelin Acetate?
Ungathenga i-Triptorelin Acetate ezitolo eziqinisekisiwe zezidakamizwa kwimiyalo. Ungavakashela noma yiliphi igatsha le Phcoker ukuthola i-Triptorelin Acetate yakho ngentengo ebiza kakhulu. Njalo hlola uhlobo lomkhiqizo nosuku lokuphelelwa yisikhathi ngaphambi kokuthenga i-Triptorelin Acetate.